रोचक – Online Palanchok
शौचालय नभेटेपछि सडकमै शौच गर्न बाध्य भएकी थिइन् यी चर्चित बलिउड नायिका !
एजेन्सी- बलिउडमा पछिल्लो समय आलिया भट्ट राम्रै चालिरहेकी छिन्। अहिले सम्म धेरै हिट चलचित्र दिसकेकी आलिया अहिले रणवीर कपूरसँगको प्रेम प्रसंगको कारण पनि चर्चामा छिन्। आलिया प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता महेश भट्ट र अभिनेत्री सोनी राजदनकी पुत्री रहेकी छिन्। सन् १९९९ मा सङ्घर्ष नामक चलचित्रमा बाल-कलाकारको रूपमा फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी आलियाले सन् २०१२ मा स्टुडेन्ट अफ द इयर चलचित्रमा पहिलोपटक मुख्य भुमिका निभाएकी थिइन्। उनले पछिल्लो समय लगातार हिट चलचित्र दिइरहेकी छिन्। आलियाको चलचित्र “गली बोय” यहि फेब्रुअरी १४ मा रिलिज हुँदैछ। यो चलचत्रले पनि बलिउडमा राम्रै कमाइ गर्ने आकलन गरिएको छ। कामको शिलशिलामा हरेक सुविधा पाउन सम्भव नहुने आलियाको बुझाइ छ। एक अन्तर्वार्ताको क्रममा आलियाले एक अचम्म लाग्ने तथ्यको खुलासा गरेकी थिइन्। ‘हाईवे’को शूटिंगको क्रममा आफू सार्वजनिक रुपमा शौच गर्न बाध्य
यी ५ प्रकारका पुरुषलाई घृणा गर्छन् महिला, जानी राख्नुहोस
लैङ्गिक हिसावले हरेक नारी पुरुषप्रति आकर्षित हुन्छे । तर यसो भन्दैमा सबै नारी हरेक पुरुषप्रति आकर्षित भैहाल्छन् भन्ने चाँहि छैन । अझ एक अध्यनले त पाँच प्रकारका पुरुषलाई महिलाले घृणा गर्ने देखाएको छ । Related image घमण्ड देखाउनेः हुनत समाजलाई अझै पनि पुरुष प्रधान भन्ने गरिन्छ तर अहिलेका स्त्रीले आफू ठूलो हुँ भनेर रवाफ प्रस्तुत गर्ने पुरुषलाई मन पराउँदैनन् । यदि तपाइँअझै पनि म पुरुष हुँ भन्ने भाव राखेर महिलासँग ब्यवहार गर्नु हुन्छ भने तपाइँका जमाना गए । रचनात्मकरुपमा सम्झाउने वा सिकाउने पुरुषलाई पराएपनि होच्याउने र जिस्काउनेलाई भने मन पराउँदैनन् । महिला विज्ञहरुले महिलालाई मायाँ गर्ने र सम्मानजनक ब्यवहार गर्ने पुरुष मन पराउने बताएका छन् । रिसाहाः चलचित्रमा रिसाहा र साहसी एवं जे कुरामा पनि कडारुपमा प्रस्तुत हुने युवक राम्रो लागेपनि वास्तविक जीवनमा स्त्रीको रोजाइमा यस्ता युवक पर्दैन
काठमाडौँ – संसारकै सबैभन्दा रोमान्सले भरीपूर्ण खेल भनिन्छ सेक्सलाई । तर सेक्सलाई जति सामान्य रुपमा बुझिन्छ यो त्यो भन्दा कैयौँ गुणा जटिल छ भन्ने कुरा बुझ्न मानिसलाई समय लाग्छ । ब्यबहारिक जिवनमा नपुगी अल्लारे युवा युवतीले यो कुरा कहिल्यै बुझ्दैनन् । जोशमा होस गुमाएर आफुलाई परेपछि बल्ल चेत खुल्ने उमेरका युवाहरुले पनि सेक्सलाई रोमान्टिक बनाउन गर्भ नरहने गरी सेक्स गर्नु आवश्यक छ । एक त गर्भ राख्नु भनेको धेरै कुराको तालमेल मिलाउन सक्नु पनि हो । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ नै । तर कतिपय अवस्थामा लामो समयसम्म पनि गर्व नरहन सक्छ । यो पनि परिस्थितीजन्य कुरा हो । चिकित्सकका अनुसार सामान्यतः महिनावारीको नवौं दिनमा यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना न्यून हुन्छ । महिनावारी ठीक २८ दिनमा नभै ढिलो चाँडो हुन्छ भने केही केही तलमाथी होला नत्र यो दिन अस्थायी साधनको प्रयोग
धनी हुनेहरुको हात यस्तो हुन्छ हस्त रेखा, तपाईको हातमा के यस्तै छ त ?
एजेन्सी । हस्त रेखा विज्ञानले मानिसको सबै कुरा हातका रेखाले निर्धारण गर्ने बताउँछ । यी रेखा हाम्रो जन्मकै क्रममा बन्ने र यीनको प्रभाव जीवनभर रहने बताइन्छ । यहाँ हामीले धनी हुने ब्यक्तिका हातका रेखा कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौं । जौको चिन्ह : समुन्द्र शास्त्रका अनुसार जुन ब्यक्तिको हातमा औंलाको जौ जस्तो चिन्ह हुन्छ त्यस्ता ब्यक्ति निक्कै धनीमानी र सुखी हुने बताइन्छ । यो चिन्ह हुने ब्यक्ति भाग्यमानी पनि हुने गर्छन् । समाजमा प्रतिष्ठिन हुने र राजनीतिमा लागे सफल राजनीतिज्ञ हुने हस्त रेखा विज्ञानको दावी छ । शंखको चिन्ह : अध्यात्मको दृष्टिले हातमा शंखको चिन्ह हुनु निक्कै राम्रो मानिन्छ । यस्ता चिन्ह भएका ब्यक्ति बुद्धीमान हुने बताइन्छ । जुन ब्यक्तिको चार वटा औंलामा शंकको चिन्ह छ त्यस्ता ब्यक्तिले सरकारी उच्च पदस्थ पद प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । ५ बटै औंलामा यस्तो चिन्ह
बाबा र ममीको यौनसम्पर्क गरिरहेको प्राय थाहा पाइरहन्छु कुनैबेला त देखेरपनि नदेखे जस्तो गर्नुपर्छ । जसको कारण मेरो मनमा उहाँहरु प्रति नराम्रो छाप बसेको छ । यसले गर्दा मलाई दिक्दार लाग्न थालेको छ । यो परिस्थितिमा म कसरी सफलता हासिल गर्नसक्छु ? कतिपय परिवारमा अभिभावकहरु बीचको यस्तो यौन क्रियाकलापका गतिविधिहरु भएका हुन्छन र कतिपय छोराछोरीहरुले थाहा पाएका हुन्छन् । यो एक किसिमको खुल्ला गोपनीयता जस्तै हुने गरेको धेरै बालबालिकाले आफ्ना मिल्ने साथीहरुसँग गुनासो गरेको हुन्छन् । त्यस्तो अनुभव गरेको प्राय छोराछोरीहरुले यसलाई समान्य रुपमा नै लिएका हुन्छन् । तरपनि सबै बालबालिकाले अभिभावकहरुको यस्तो व्यवहार समान्य रुपमा स्वीकार्न सकेका हुदैनन । छोराछोरीहरु जो किशोरअवस्थामा पुग्न थाल्दछन, उनिहरुको शारीरिक मानसिक र संवेगात्मक परिवर्तनहरू तीव्र गतिले भइरहेको हुन्छ । सम्झनुहोस् त तपाई आजभन्दा २–४ वर्ष
बजारीकरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चरमरुपभन्दा फरक नपर्ने एउटा उदाहरणको रुपमा लण्डनको बुनयादी रेष्टुरेन्टलाई लिन सकिन्छ ।लण्डनको केन्द्रमा रहेको अग्लो टावरहरुमध्येको एक दि सेयर्डबाट केहि गल्ली पार गरेपछि पुगिने यो रेष्टुरेन्ट लण्डनको पहिलो नाङ्गो रेष्टुरेन्ट बन्न पुगेको छ । यो रेष्टुरेन्टमा ग्राहकले बाँसले बारिएको सानो कोठामा बाँसकै टेबुलमा नांगै साथीसँग बसेर अग्र्यानिक खाना खान पाउँछन् । बाहिरबाट हेर्दा यो रेष्टुरेन्ट खासै भव्य देखिँदैन , झ्यालहरु बन्द गरेर भित्र अँध्यारो पारिएको छ । तर मैनवत्तीको मधुरो उज्यालोमा युवायुवती नांगै खाना खाइरहेका हुन्छन् । त्यतिमात्रै होइन रेष्टुरेन्टका कर्मचारीले पनि नांगै सेवा दिइरहेका हुन्छन् । सो रेष्टुरेन्टमा खाना खानका लागि ४६ हजार मानिस प्रतिक्षाको सूचिमा छन् जुन तीन महिनासम्मको लागि हो ।त्यहाँभित्र सेल फोनमा कुरा गर्न र कुनै तस्बीर लिन पाइँदैन
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा #SHARE गर्नुहोस7दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!! अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी #like गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ! यो पनि पढ्नुस परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष
प्रेमिका विर्साउने वास्तविक युवती जस्तै लाग्ने ‘सेक्स टोय’ ! कति पर्छ मूल्य
जापानी कम्पनीले सेक्स टोयको विकाशमा आफू नयाँ चरणमा पुगेको दावी गरेको छ । अव पुरुषका लागि अनुहारको रंग बदलिने र बास्तविक जस्तै आँखा भएका यौन खेलौना तयार पारेको कम्पनीको दावी छ । कम्पनीले सिलिकनबाट बनेका नयाँ उच्च स्तरीय सेक्स टोय वास्तविक महिला भन्दा खासै फरक नदेखिने र प्रयोग गर्दा पनि वास्तविक जस्तो नै लाग्ने कम्पनीको दावी छ । ‘डच वाइभ्स’ नाम दिइएका ती उत्पादनको विज्ञापन गर्दै उक्त कम्पनीले एक पटक आफ्ना उत्पादन प्रयोग गरेपछी वास्तविक प्रेमिकाको खोजी नगर्ने दावी समेत गरेको छ । जापानी भाषामा डच वाइभ्स भनेको यौन खेलौना हो । खेलौनाको मूल्य १ हजार डलर छ । शुरुमै कम्पनीले उच्च सफलता हासिल गरेको देखिएको छ । आफूले बनाएका खेलौना वास्तविक जस्तै भएका कारण विक्री उच्च भैरहेको कम्पनीको दावी छ । कम्पनीले यस्ता सेक्स टोय किन्दा आफूले छानेको कपालको रंग र पहिरन तथाँ आँखा छान्न सकिने बताएक
बिरामीको चेक जाँचपछि नर्सले लेखेको रिपोर्ट हेर्दा बिरामी नै बेहोस !
काठमाडौँ । संसार निकै ठूलो छ । विशाल संसारका मानिसहरुले बोल्ने भाषा पनि उत्तिकै रुपमा व्यापक छ । सबै ठाउँका मानिसहरु सबै भाषमा विज्ञ नहुँदा धेरै समस्याहरु पर्ने गर्छ । जस्तै उदाहरणको लागि तपाईसँग बोल्ने मान्छेको भाषा नबुझ्दा कस्तो समस्या आउँला भन्ने करा आफै कल्पना गर्नु होला ? भाषोको समस्या चीनको एक अस्पतालमा काम गर्ने नर्सलाई समेत परेको छ । चीनको एक अस्पतालमा काम गर्ने क्रममा एक विदेशी बिरामीलाई उपचार गरेर यस्तो म्यासेज छोडिन की जुन देखेपछि बिरामी झण्डै बेहोस भएका थिए । चीनको एक अस्पतालमा विदेशी विद्यार्थी बिरामी भएको कारण अस्पतालमा भर्ना गरियो । त्यो बेलामा यस्तो नर्सको ड्युट पर्यो उनलाई निकै गाह्रो भयो जबकी उनी अंग्रेजी भाषा बोल्न जान्दैनथिइन् । तर विरामीलाई उसलाई के रोग लागेको कुन औषधी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिनुपर्ने थियो । अंग्रेजी भाषा नजान्दा नर्सले निकै रोचक त
१ वर्षकी छोरीले बचाइन् आमाको ज्यान, बालिकासँग कहाँबाट आयो अलौकिक शक्ति ?
हल। इङल्याण्डकी एक महिलाकी १ वर्षकी छोरीले अचानक उनको बायाँ स्तनबाट दूध पिउन बन्द गरिन् । महिलालाई सुरुमा त यो सामान्य लाग्यो तर जब उनले डाक्टरकहाँ गएर यसको जाँच गराइन् उनको होश उड्यो । जाँचमा थाहा भयो कि महिलाको बायाँ स्तनमा क्यान्सर भएको थियो । क्यान्सर सुरुवाती चरणमै थियो र समयमै उपचार गराएका कारण क्यान्सर पूरै ठिक भयो । अहिले महिला क्यान्सरमुक्त भइसकेकी छिन् । उनकी एक वर्षकी छोरीले आफ्नो ज्यान बचाइदिएकोमा उनी छोरीप्रति आभारी छिन् । इङल्याण्डको हल शहरमा बस्ने क्लेयर ग्रेनभिले पेशाले नर्स हुन् । ४० वर्षकी क्लेयरकी १ वर्षकी छोरी मटिल्डाले गएको अप्रिल महिनामा एक्कासी आमाको बायाँ स्तनबाट दूध पिउन बन्द गरेकी थिइन् । एउटा स्तनबाट मात्र दूध पिउन छोड्नु क्लेयरलाई केही अनौठो लाग्यो । त्यसपछि उनी डाक्टरकहाँ गइन् । डाक्टरले केही टेस्ट गराए जसबाट थाहा भयो कि महिला क्यान्सरपीडित छिन् । क्लेयरको